Ergeyga gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la fuliyo heshiiskii kal horey ay Doorashada 2020/2021 ka gaareen Madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul Goboleedyada.
Isagoo la hadlayey Tvga Aljazeera ayuu sheegay in doorashada dalka ay ku dhaco waqtigii loogu tala-galay, isla markaana Madaxda ilaaliyaan heshiiskii la gaaray, si aysan dhib u dhac ugu imaan Doorashada oo Jadwalkii lasoo saaray uu fashilmay.
Danjire James Swan waxaa kale oo uu xusay in muhiim ay tahay in si wadajir ah loo ilaaliyo ammaanka dalka Soomaaliya, maadaama la guda galayo doorashooyinka dalka, wuxuuna ku baaqay mar kale in la fuliyo heshiiskii la gaaray.
Dhinaca kale James Swan ayaa difaacay shaqada Xafiiska Qaramada Midoobay ka wado gudaha Soomaaliya, xili uu sheegay inay jiraan eedeymo kala duwan oo loo jeediyay, wuxuuna Carabka ku dhuftay in 30-kii sanno ee lasoo dhaafay ka shaqeynayeen sidii dalka Soomaaliya uu gaari lahaa horumar waxtar leh.
Hadalka wakiilka xoghayaha guud ee qaramada Midoobey ayaa ku soo beegmaya xilli loo diyaar garoobayo doorashada madaxtinimada Soomaaliya iyo qabsoomidda xildhibaanada labada aqal ee barlamaanka Soomaaliya.